0 Thursday December 12, 2019 - 21:31:22
0 Thursday December 12, 2019 - 21:29:08
0 Wednesday December 11, 2019 - 20:37:28
Bayaankan oo ku qornaa luuqada English-ka uuna ku saxiixnaa Afhayeenka ciidanka Al Shabaab Sheekh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa lagu faah faahiyay weerarkii aadka u xooganaa ee dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaadeen Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho, iyagoona sheegay in weerarku beegsaday…
0 Monday November 11, 2019 - 10:53:22
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa jawaab daciif ah ka bixiyay hanjabaaddii iyo eedayntii uu shalay jeediyay Shariif Sheekh Axmed oo horay usoo noqday madaxweynaha VIlla Somalia.
0 Tuesday October 29, 2019 - 08:39:44
Xaalad adag ayaa lasoo daristay tobanaan kun shacab ah oo ku dhaqan magaalada Beled Weyne iyo hareeraheeda kadib markii uu ku fatahay Wabiga Shabeelle.
0 Saturday October 19, 2019 - 08:25:53
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal lagu dilay mas'uul sare oo katirsanaa maamulka isku magacaabay Puntland ee kajira gobollada Waqooyi Bari Soomaaliya iyo gobolka Mudug.
0 Thursday October 17, 2019 - 07:20:17
0 Wednesday October 16, 2019 - 07:25:20
0 Monday October 14, 2019 - 09:48:05
0 Monday September 23, 2019 - 08:51:47
0 Monday September 23, 2019 - 08:38:13
Qoob gariir siyaasadeed ayaa ka jira madaxtooyada Villa Soomaaliya saacado kadib markii ay shirar jaraa'id qabteen hoggaamiyaashii soo maray dowladda Federaalka kuwaas oo si kulul uweeraray qaabka maamulka ee Farmaajo iyo Kheyre.
0 Monday September 23, 2019 - 08:36:48
Khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay guri kusoo dumay magaalada ugu weyn wadanka Kenya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
0 Sunday September 22, 2019 - 08:08:55
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa aroornimadii hore ee saaka weerar xoogan kula jarmaaday sadhigga maleeshiyaatka DFS ee deegaanka Ceel Saliini ee duleedka degmada Marka Sh/Hoose.
Waxaan Akhristayaasha SomaliMeMo ugu bishaarayneynaa in Shabakaddu Channel cusub ay ku leedahay aaladda Telegram-ka, kaasi oo aan ku soo gudbin doono wararka iyo Warbixinada waliba si dhaqsi badan.